Minengi Imidlalo Yenguqu eyeCastle Premier Soccer League Limpelaviki
Nkwenkwezi 02, 2014
BULAWAYO — Imidlalo yenguqu esigabeni seCastle Premier Soccer League iqhubekela phambili ngoMgqibelo lapho abalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lako Bulawayo abelethuba lokubukela imidlalo emibili eyesigaba saphezulu enkundleni yeLuveve.
Akubizwa ozwayo ngoMgqibelo enkundleni yeLuveve lapho okulemidlalo emibili eyesigaba seCastle Premier Soccer League.
Umdlalo wakuqala uzakuba phakathi kweqembu le Bantu Rovers lele Chiredzi ngehola lakuqala emini kuthi owesibili uzakuba phakathi kweqembu le How Mine leqembu elihlezi phezu kwengalane ele Hwange ngehola lesithathu emini.
Limidlalo izadlalelwa enkundleni eyodwa ngelanga elifanayo ngoba izacindezelwa ukuba ibukelwe kumabonakude ngabe Supersport.
Omunye umdlalo ozadlalwa ngoMgqibeo ngozakuba phakathi kweqembu le FC Platinum lele Harare City enkundleni yeMandava.
NgeNsonto amaqembu azadlala ngokulandelayo: ###########
Iqembu le Highlanders lizemukela iqembu le CAPS United enkundleni ye Barbourfields okungumdlalo oza ngemva kokuba iqembu le Bosso lehluleke ukunqoba emidlalweni emibili edluleyo eliyidlalele eMagumeni.
Intshantshu zanyakenye iqembu le Dynamos lizadibana lele Buffaloes enkundleni ye National Sports kuthi ele Triangle lizadlala lele ZPC Hwange enkundleni ye Gibbo, enkabazwe iqembu le Chapungu lizangqikilana lele Shabanie Mine ngase Ascot kuthi iqembu le Black Rhinos lizadlephana lele Chicken Inn ngase Rimuka.
Sikhangele umdlalo wokugijima: ###################
Intshantshu yomdlalo wokugijima eyisizalwane saseZimbabwe uRutendo Nyahora ukhangelelwe njengomunye wabadlali abalakho ukunqoba kumjaho we Spar Women’s challenge ozaqhutshelwa edolobheni le Port Elizabeth elizweni le South Africa ngeNsonto.
UNyahora nguye owanqoba kulumncintiswano ogijinywa phakathi kwamakhilomitha alitshumi nyakenye njalo ukhangelelwe ukuncintisana kanzima lo Lebo Phalula odabuka khonale eSouth Africa okunguye onqobe kuhlandla lalumncintiswano eliqhutshelwe edolobheni le Cape Town ngenyanga edluleyo.
UNyahora uqede ekundawo yesine emncintiswaneni we Cape Town njalo nyakenye nguye onqobe kumahlandla womabili aqhutshelwe eKapa lase Bhayi.
UThokozani Khupe Uthi Kaxotshwanga kuMDC-T, Osezixotshisile NguMwonzora Othi Ungumkhokheli weMDC Alliance